၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ - ဝီကီပီးဒီးယား
လောင်ကျွမ်းနေသည့် အိမ်တစ်အိမ်အား တွေ့ရစဉ်
ရမ်းဗြဲကျွန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ
၂၀၁၂ ဇွန်လ ၈ ရက် (UTC+06:30)
ဇွန်လ ၈၈ ဦး
အောက်တိုဘာလ ၆၄ ဦး
၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခ မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်နေကြသည့် ရခိုင် လူမျိုးစုများနှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုများအကြား တစ်ဘက်နှင့် တစ်ဘက် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ကြသည့် ဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်။ အဓိကရုဏ်းသည် လူမျိုးနှစ်စုအကြား အချင်းချင်း အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း၊တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကြမ်းဖက်မှု၏ အခြေခံကို မသိရှိနိုင်သော်လည်း မေလ အစောပိုင်းတွင် ကျောက်နီမော်ရွာ ၌ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး (မသီတာထွေး၊ သပြေချောင်းရွာ)နေသူအား မွတ်စလင် ၃ ဦး မှ မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် မွတ်စလင် မုန်းတီးရေးအရှိန်မြင့်သထက် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အစွန်းရောက်အဖွဲ့၏ လီဆယ်လှုံ့ဆော်ချက်သည် ချက်ချင်းပင် ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြား ပျံ့နှံ့သွားကာ ရခိုင်လူထု၌ ဒေါမာန်မီး တဟုန်းဟုန်းလောင်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြား၌ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများကို တိုက်ခိုက်မှုများ ကွက်ကျကွက်ကျ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုမျှနှင့် မတန့်သေးပေ။ ရခိုင်ပြည်မှ မွတ်စလင် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးကို အစီအစဉ်ဆွဲကာ လူ ၄၀၀ ခန့်ရှိသော အစွန်းရောက် ရခိုင်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတစ်စုက ဘာသာရေးအားထုတ်သူ ပြည်မပြန်နေသော အပြစ်မဲ့ မြန်မာမွတ်စလင် ၁၀ ဦးကို တောင်ကုတ်၌ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုလီဆယ် မုဒိမ်းမှု ဖြစ်ရပ်မှာ မွတ်စလင်တို့၏ လက်ချဖြစ်ဟန် နိုင်ငံတကာက ယုံကြည်လာအောင် အပြစ်မဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူငယ် (၃) ဦးကို ရခိုင်ပြည်နယ် အာဏာပိုင်က ဖမ်းဆီးကာ တရားရင်ဆိုင်ခွင့် မပေးခဲ့ဘဲ ရက်ချင်းပင် သေဒဏ်စီရင်ခဲ့သည်။ ထိုထဲမှ တစ်ဦးမှာ သေကြောင်းကြံခဲ့သည်ဟု အစိုးရတာဝန်ရှိတို့က လိမ်လည် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာ ဖမ်းဆီးချိန်တွင် အစွန်းရောက် ရခိုင်လူအုပ်နှင့် ရဲသားတို့က ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆူပူတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားရာ မြို့နယ်များတွင် မြန်မာအစိုးရမှ ညမထွက်ရအမိန့်များထုတ်ခဲ့ပြီး၊ စစ်တပ်များ နေရာအလိုက် ချထားခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၁၀ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အပေါ် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ စစ်တပ်သို့ အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ရဲသား၊စစ်တပ်၊ ရခိုင်အစွန်းရောက်သမားတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ မွတ်စလင် အိုးအိမ်များကို တရစပ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ မြန်မာအစိုးရနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့သည် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုများအပေါ် အဓိက ပိုမိုဖမ်းဆီးနှိပ်ကွက်သည်ဟု ပြည်ပမီဒီယာအချို့နှင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့က ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်း ပြုခဲ့သော်လည်း အစိုးရက မွတ်စလင်တိုင်းရင်းသားများကို မည်သည့် အကာအကွယ်မှ မပေးခဲ့ဘဲ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များတွင် အာဏာပိုင်များ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများကမူ အစိုးရနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လျော့ရဲသက်ညှာစွာကိုင်တွယ်လွန်းခြင်းကြောင့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ခြင်းကို အားပေးသလိုရှိခဲ့သည်ဟု ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ ပဋိပက္ခကို တိုးမြင့်လာအောင် အဓိကကြိုးကိုင်ခဲ့သူမှာ ဝီရသူ ဦးဆောင်သော မဘသ ခေါ် အမျိုးဘာသာစောင့်ရှောက်ရေး ၉၆၉ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ မေလ၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများကြောင့် သေဆုံးသူ ၅၀ ဦး၊ ဒဏ်ရာ ရသူ ၅၄ ဦးရှိခဲ့ပြီး လူနေအိမ် ၂၂၃၀ လုံးနှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ ၁၄ ခု ထိခိုက်ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး ဒေသခံ ပြည်သူ ၆၁၄၆၂ ဦး အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု အစိုးရထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းများအရ သိရသည်။
၁ ဇွန်လ ဆူပူမှု
၁.၁ ဇွန်လ ၈ ရက် တိုက်ခိုက်မှု
၂ အောက်တိုဘာ တကြော့ပြန် ပဋိပက္ခ
ဇွန်လမှစတင်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်များနှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတို့ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည့် နေအိမ်အဆောက်အဦးများကို ဖျက်ဆီးကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဇွန်လ ၈ ရက် တိုက်ခိုက်မှု[ပြင်ဆင်ရန်]
လုံခြုံးရေတိုးမြှင့်ခဲ့သော်လည်း၊ ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်း ၃နာရီ မိနစ် ၅၀ခန့်တွင် ရခိုင် လူစုကြီးမှ မောင်တောမြို့၊ ဗိုမှူးရွာရှိ နေအိမ်များကို မီအခဲ့ကြသည်။ တယ်လီဖုန်းလိုင်းများလည်း ပျက်စီးခဲ့သည်။  ညနေခင်းတွင် မှူးဇော်၊ အရာရှိတစ်ဦးမှ လုံးခြုံရေးတပ်များမှ မောင်းတောမြို့တွင် လောင်ကျွမ်းနေသည့် ရွာ ၁၄ခုကို အကာအကွယ်ပေးနေသည်ဟု တင်ပြခဲ့သည်။ ၅နာရီခွဲအချိန်တွင် တာဝန်ရှိသူများသို့ ပစ်မိန့်များပေးခဲ့သော်လည်း၊ ဟန့်တားအသိပေးသည့် ပစ်ခြင်းများရှိခဲ့သည်ဟု ပြည်တွင်းမီဒီယာများမှဆိုကြသည်။ များမကြာခင်အချိန်တွင် တာဝန်ရှိသူတို့မှ မောင်းတောတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်များ တည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သော်လည်း၊ မောင်းတောတောင်ဘက်ရှိ ရွာသုံးရွာရှိ နေအိမ်များ ညနေစောခင်းအတွင် ဆက်လက် အရှို့ခံခဲ့ရသည်။ ည၉နာရီအချိန်တွင် နေအိမ်အပြင်မထွက်ရ အမိန့်ကြေညာခဲ့ပြီး လူငါးယောက်ထက် ပိုမိုစုဝေးခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ တစ်နာရီကြာပြီးနောက် ခရေမြိုင်ရွာတွင် ရဲများမှ သောင်းကြမ်းသူအုပ်စုများကို ဝိုင်းဝန်းနိုင်ခဲ့ပြီး၊ လူစုခွဲစေရန် ဟန့်တားအသိပေးပစ်ခဲ့သည်။ ၁၀နာရီတွင် စစ်တပ်မှ မောင်းတောတွင် နေရာချနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ထိုနေ့တွင် လူ၅ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အောက်တိုဘာ တကြော့ပြန် ပဋိပက္ခ[ပြင်ဆင်ရန်]
အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ပဋိပက္ခများ တကြော့ပြန်ဖြစ်ပွားသော မြို့နယ်များမှာ မင်းပြား၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ ကျောက်ဖြူ၊ ရသေ့တောင်၊ သံတွဲ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မြေပုံနှင့် ပေါက်တောတို့ ဖြစ်သည်။
ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများကြောင့် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၈၄ ဦးနှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ ၁၂၉ ဦး ရှိကြောင်း၊ စုစုပေါင်း နေအိမ် ၂၉၅၀ နှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အုံ ၁၄ လုံး၊ ဆန်စက် ၈ လုံး မီးလောင်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟု အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ရသော ရခိုင်ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကက အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်မှုသည် စိုးရိမ်လွန်ပြီး နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများက ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံရေး အင်အားတိုးမြင့်ချမှတ်ထားမှုကြောင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ပြန်လည် ရရှိနေပြီဟု ရေးသားထားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ ၅၀ဝ၀ ကျော်၊ နစက တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ဝ၀ ကျော်၊ တပ်မတော် တပ်ရင်း ၅၁ ရင်းတို့ဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဒေသ တည်ငြိမ်ရေး ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ 
ယခု တကြော့ပြန် ပဋိပက္ခကြောင့် ထပ်မံတိုးပွားလာသည့် နောက်ထပ် ဒုက္ခသည် ၂ သောင်းကျော်တွင် အများစုမှာ မွတ်ဆလင်များဖြစ်ပြီး ယခင်က ရခိုင် လူမျိုးများနှင့် အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ခဲ့သည့် ကမန်လူမျိုး မွတ်ဆလင်များလည်း ပါဝင်သည်ဟု CNN သတင်းတပုဒ်တွင် ကုလသမဂ္ဂကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူ သုံးဦးမှ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း လူမှု အဖွဲ့ များ၌ တဘက်နှင့် တဘက် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် မှုတွေများနှင့် ပါတ်သက်၍ အထူး စိုးရိမ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အကြမ်းဖက်မှုများကို ရပ်တန့်ကြရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 
↑ Press Release (PDF)။ Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Foreign Affairs (21 August 2012)။ 27 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar sets up internal probe of sectarian unrest။ The Guardian (17 August 2012)။ 27 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Myanmar gov't refutes accusations of religious persecution, discrimination in Rakhine incident။ Xinhua (27 October 2012)။ 27 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Burma admits Rakhine destruction။ BBC News (27 October 2012)။ 27 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Four killed as Rohingya Muslims riot in Myanmar: government"၊ 8 June 2012။9June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 October 2015။
↑ BBC Burmese - မြန်မာ့ရေးရာ - မွတ်ဆလင်တွေကို မောင်းထုတ်တဲ့ ဆန္ဒပြမှု ရဲက ပစ်ခတ် နှိမ်နင်း
↑ Hla Oo's Blog: Massacre of Bengali-Muslims by Yakhine Buddhists?
↑ Why is there communal violence in Myanmar? - BBC News
↑ Linn Htet (11 June 2012)။ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာချက် နိုင်ငံရေးသမားများ ထောက်ခံ။ The Irrawaddy။ 11 June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Keane၊ Fergal။ "Old tensions bubble in Burma"၊ BBC News Online၊ 11 June 2012။ 11 June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hindstorm၊ Hanna။ "Burmese authorities targeting Rohingyas, UK parliament told"၊ 28 June 2012။9July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 25 September 2018။
↑ "Muslim, Buddhist mob violence threatens new Myanmar image"၊ NDTV၊ 11 June 2012။9November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2012။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Curfew imposed in Rakhine township amidst Rohingya terrorist attacks။ Eleven Media Group (8 June 2012)။ 14 June 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ Dozens killed, hundreds of buildings burnt down by Bengali Rohingya mobs in border town of Maungdaw။ Eleven Media Group (9 June 2012)။ 11 June 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့၌ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွား ဒေသရပ်ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရရှိစေရေး အတွက် ပုဒ်မ (၁၄၄) ထုတ်ပြန်၍ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ။ Presidential Office of Myanmar (8 June 2012)။ 20 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို တပ်မတော် စတင်အုပ်ချုပ်
↑ BBC Burmese - မြန်မာ့ရေးရာ - ရခိုင်ပဋိပက္ခ ကုလသမဂ္ဂ အထူးစိုးရိမ်
↑ Statement from National League for Democracy။ National League for Democracy (9 June 2012)။ 16 December 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၂_ရခိုင်ပြည်နယ်_ပဋိပက္ခ&oldid=743054" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၂:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။